यदि दुधमा अमिलो हाल्यो भने दुध फाट्छ, कसरी ? जान्नुहोस् – tvNepali.net
यदि दुधमा अमिलो हाल्यो भने दुध फाट्छ, कसरी ? जान्नुहोस्
दुध सबैले पिउनु हुन्छ, तर दुध किन र के कारणले फाट्छ भन्ने जानकारी न हुन सक्छ । दुध फाट्दा जुन परिबर्तन हुन्छ, त्यो दुधमा भयका साना साना किटाणु का कारण ले गर्दा दुध फाट्छ ।यदि दुध लाई राम्ररि उमालेर कुनै यक भाँडोमा बन्द गरेर राख्ने हो भने त्यो लामो समय सम्म नफाट्न सक्छ । किन भने उमाल्दा तेस्मा भयका सबै किटाणु हरु मरिसकेका हुन्छन ।
दुध फाट्दा त्यसमा उत्पन्न हुने तत्व लाई ‘ल्याक्टिक एसिड’ भनिन्छ। यो पदार्थ हाम्रो लागि फाइदाजनक नै हुन्छ, यदि सफा नै दुध फाट्यो भने त्यसलाई खाँदा केहि बेफाईदा हुदैन मानिसहरु लाई त यो दुध भन्दा पनि मिठो हुन्छ । भिडियो हेर्नुहोस् :
PreviousPrevious post:A बाट नाम आउने व्यक्तिहरुको स्वभाब र आचरण कस्तो हुन्छ ? थाहापाउनुहोस्
Next Next post:कसरी अन्यायीलाई बहाना चाहिन्छ ? – हरेक मानिसले एक पटक हेर्नै पर्ने
दुधमा बेसार मिसाएर सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई हुने फाइदाहरु